Dalka Imaaraadka “Xiriirka labada dal ayay wax u dhimaysaa Lacagtii lagu qabtay Garoonka Muqdisho..” - Latest News Updates
Dalka Imaaraadka “Xiriirka labada dal ayay wax u dhimaysaa Lacagtii lagu qabtay Garoonka Muqdisho..”
Markii ugu horaysay ayay Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ka hashay lacagtii Ciidanka la dagaalanka Argagixisada ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ay ku qabteen Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Imaaraadka Carabta ayaa waxaa lagu sheegay in falkaasi ay aad u cambaareynayaan, lacagta Diyaaradda saarneyd-na loogu tala galay Ciidanka Qaranka Soomaaliya.
Imaaraadka ayaa eedeyn u soo jeediyay Saraakiisha ammaanka Soomaaliya, waxayna sheegeen inay si xun ula dhaqmeen rakaabkii Diyaaradda saarnaa, waxay kaloo sheegeen in Ciidamada ammaanka ay qaateen lacag caddaan ah oo ay qayb ka ahayd lacagaha loo qoondeeyey inay Soomaaliya ku caawiso.
Dowladda Imaaraadka waxay sheegtay in falka ka dhacay Garoonka Diyaaradaha inuu yahay dhaqan sharci daro ah, jabinayana sharciga caalamiga ah, iyada oo sidoo kale sheegtay inay muhiim tahay in la ilaaliyo xiriirka labada dal.
“Hadaba Tallaabadani waa tallaabo sharci darro ah oo ka soo horjeeda qawaaniinnada diblomaasiyadeed ee asaasiga ah ee u dhaxeeya labada wadan iyo jebinta qodobbada Heshiiska Is-fahamka ee la saxiixay Novembar 2014.” Ayaa lagu yiri Warka qoraalka ah ee ka soo baxay Imaaraadka.
Dhanka kale Lacagtaan ayaa la sheegay in baaritaan uu ku socdo, sida saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya ay sheegeen.